हातले भाँचिने फलामका डण्डी बेच्दै जगदम्बा स्टिल्स! – Jagaran Nepal
हातले भाँचिने फलामका डण्डी बेच्दै जगदम्बा स्टिल्स!
काठमाडौं । आफूलाई देशकै शक्तिशाली स्टिल कम्पनी भएको दाबी गर्ने जगदम्बा स्टिल्सका सामानमा खराबी भेटिएको छ। काठमाडौंको बनस्थलीमा घर बनाइरहेका गोरखाका श्रीकृष्ण भट्टराई पछिल्लो समय निकै तनावमा छन्।
सामानमा खराबी देखिएपछि डिपो सञ्चालकलाई आफूले फोन गरेको पीडित भट्टराई बताउँछन। तर, जगदम्बा स्टिल्सका प्रतिनिधिले किन भाचिँने डन्डी प्रयोग गरेर घर बनाएको भनेर उल्टै हप्काएको उनी बताउँछन्।
फोन गरेपछि जगदम्बाका प्रतिनिधि आएर ल्याब परीक्षणका लागि रडका केही टुक्रा मागेका थिए। सामानमा खराबी नभएको र गुणस्तरीय रहेको उनीहरूको दाबी छ।
तर, उनीहरूकै सामू आफूले हातले फलामका रड भाचेर दिएको पीडित भट्टराईले बताए। ‘इन्जिनियरहरूले ल्याब टेस्टका लागि ३ टुक्रा रड माग्नु भयो, काटेर होइन हामीले हातले भाँचेरै दियौं’, भट्टराई सुनाउँछन्। ‘डिफेक्ट’ रहेका रड बेचेर आम नेपालीलाई जगदम्बाले ठग्ने काम गरिरहेको उनको आरोप छ।
‘पैसा तिरिसकेपछि क्वालिटीको सामान पाउनु र निर्धक्क हुनु हरेक उपभोक्ताको अधिकार हो’, उनी थप्छन्
जगदम्बा कम्पनीको सामानबारे सरकारलेनै अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदननै सार्वजनिक गर्नुपर्ने अर्का कन्ट्रश्कन व्यवसायी सुझाउँछन्।